Duqeyn ka Dhacday Gobolka Jubada Dhexe. - Awdinle Online
Duqeyn ka Dhacday Gobolka Jubada Dhexe.
Diyaarado dagaal balse aan la ogaan wali halka laga leeyahay ayaa lagu waramay in saacadihii lasoo dhaafay ay duqeymo ka fuliyeen qaybo kamid ah gobolka Jubada Dhexe ee Jubbaland.
Degaanada kala ah; Sariiraha,Jiira-garoob,Arabow iyo garoonka diyaaradaha Bu’aalle oo ah fariisinka ugu weyn ee Al-Shabaab ee Koonfurta Soomaaliya, ayaa lagu sheegay meelaha ay diyaaraduhu ku garaaceen gantaaladda.
Ma cadda illaa iyo haatan khasaaraha ka dhashay howlgalkaan. Jubbooyinka waxaa dhaqdhaqaaqyadda noocaan ah ka fuliya ciidamadda Mareykanka oo kaashanaya kuwa Soomaalida iyo Kenyaanka.
Ma jiro wax war ah oo ku saabsan duqeyntaan oo illaa iyo haatan kasoo baxay laamaha amniga Jubbaland iyo waliba Al-Shabaab Laftooda.
Dhinaca kale, Alshabaab ayaa la sheegay in ay duleedka Bu’aale ku xayireen gaadiid ka baxay magaalada Muqdisho. Lama ogga sababta ka dambeysa talaabadan.
Waxaa ay duqeyntani Kusoo aadeysaa Iyadoo Taliyaha Ciidanka Lugta Gen Cabdi Xamiid dirir uu sheegay in Sh.hoose ay ku dileen Shan Kamid ah Dagaalyanada Alshabaab Mid kamid ahna uu ahaa sarkaalka Shabaab u qaabilsan Degmada Qoryooleey.
idoo kale Taliyaha waxaa uu sheegay in dadka lagu dilay uu kamid yahay Sarkaal lagu Magacaabi jiray Cabdi Muxsin Sheekh Xuseen ( Abuu bakar).
Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan ee duqeyn ka fuliyo Soomaaliya iyadoo Sanadihii Dambe ay Kordhiyeen Howlgaladooda dhanka cirka ah oo ay la beegsanayaan Alshabaab.
Previous articleAl-Shabaab oo weerar ku qaaday deegaanka Lambar 60
Next articleWasaradda Arrimaha Gudaha Galmudug oo soo saartay Go’aano ku sabsan Dagaal Beeleedyada